Cygnus I တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကမ္ဘာ
ချည်နှောင်ခြင်း & Cummerbunds
လက်အိတ် & Mittens
အလှပြင်ဆိုင် & Spa
အဆောက်အ ဦး များ & သိုလှောင်မှု
အားကစား & ကြံ့ခိုင်ရေး
အနုပညာ, လက်မှုပညာ & လက်ဆောင်များ
€ 10 အောက်မှာ
CYG - Cygnus တိုကင် (€) AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ) AFN - အာဖဂန်နစ်စတန် (؋) ALL - အယ်လ်ဘေးနီးယန်း (L) AMD - အာမေးနီးယန်း (AMD) ANG - နယ်သာလန်အန်တီလန် guilder (ƒ) ARS - အာဂျင်တီးနားပီဆို ($) AUD - Australianစတြေးလျဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) AOA - အင်ဂိုလာ Kwanza (Kz) AZN - အဇာဘိုင်ဂျန်မန်း (AZN) BAM - ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား (KM) BDT - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် taks (৳) BGN - ဘူဂေးရီးယား lev (лв) VES - ဘိုလီဗားစရိုဘာနို (Bs.S) BHD - ဘာရိန်း Dinar (ب.د) BIF - ဘူရွန်ဒီဖရန့် (Fr) BOB - ဘိုလီးဗီးယား (Bs) BRL - ဘရာဇီးရီးရဲလ် (R $) BWP - ပုလူး (P) BYN - ဘီလာရုစ်ရူဘယ် (Br) CAD - ကနေဒါဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) CDF - ကွန်ဂိုနိုင်ငံဖရန့် (Fr) CHF - ဆွစ်ဖရန့် (CHF)	CLP - ချီလီပီဆို ($) CNY - တရုတ်ယွမ် (¥) COP - ကိုလံဘီယာပီဆို (ဒေါ်လာ) စီအာစီ - ကိုစတာရီကန်ကိုလိုနီ (₡) CUP - ကျူးဘားပီဆို ($) CZK - ချက်ခရွန်နာ (Kč) DKK - ဒိန်းမတ်ခရို (DKK) DOP - ဒိုမီနီကန်ပီဆို (RD $) DZD - အယ်လ်ဂျီးရီးယား Dinar (د.ج) EGP - အီဂျစ်ပေါင် (£) ERN-Eritrean nakfa (Nfk) ETB-Ethiopian birr (Br) ယူရိုယူရို (ယူရို) FJD- ဖီဂျီဒေါ်လာ ($) GBP ပေါင်ဟာအဲဒီအ (£) GEL-Georgian ဂြိုလ်သား (₾) GHS-Ghana cedi (₵) GMD-Gambian dalasi ()) GNF-Guinean franc (Fr) GTQ-Guatemalan quetzal (မေး) GYD-Guyanese ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) ဟောင်ကောင် - ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) HNL-ဟွန်ဒူးရပ်စ် Lira (L) HRK- ခရိုအေရှန်ကူနာ (kn) HTG-Haitian ကြက်သွန်ဖြူ (G) ဟူး - ဟနျဂရေီအတိုငျး (Ft) IDR- အင်ဒိုနီးရှားရူပီးယား (Rp) ILS - အစ္စရေးအသစ်ရှကယ်လ် (₪) INR- အိန္ဒိယရူပီး (₹) အိုင်အက်စ်ဒီအက်စ်ဒရင်း (ع.د) IRR-Iran rial (﷼) IRT- အီရန် toman (تومان) ISK-Icelandic Icelandic (kr ။ ) JMD-ဂျမေကာဒေါ်လာ ($) JOD-Jordanian Dinar (د.ا) JPY-ဂျပန်ယန်း (¥) KES-Kenyan Shilling (KSh) ဆိုမာလီ - ခရူဂန်တီနီယမ်сом (сом) KHR-ကမ္ဘောဒီးယား riel (៛) KMF-Comorian Franc (Fr) KPW - မြောက်ကိုရီးယားအနိုင်ရ (₩) KRW - တောင်ကိုရီးယားအနိုင်ရ (₩) KWD-ကူဝိတ် Dinar (د.ك) KYD-ကေမန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ ($) KZT- ခါဇက်စတန်တန်ဂါ (KZT) လာအို - လာအို kip (₭) LBP- လက်ဘနွန်ပေါင် (ل.ل) LKR - သီရိလင်္ကာရူပီး (රු) LRD- လိုက်ဘေးရီးယားဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) LSL- လီဆိုသို loti (L) LYD- လစ်ဗျားဒါနင် (ل.د) MAD-Moroccan dirham (د.م. ) MDL-Moldovan leu (MDL) MGA-အာလာဂါစီ Arary (Ar) MKD-Macedonian ဒင်နာ (ден) MMK- ဗမာကျပ် (Ks) MNT- မှနျဂိုလီးယနျးtögrög (₮) MOP-မက်ကာနန် pataca (P) MRU-Mauritanian ouguiya (UM) MUR-Mauritian ရူပီး (₨) MNT- မှနျဂိုလီးယန်းtögrög (₮) MVR-Maldivian rufiyaa (.ރ) MWK- မာလာဝီ Kwacha (MK) MXN- မက္ကဆီကန်ပီဆို ($) MYR - မလေးရှားရင်းဂစ် (RM) MZN- မိုဇမ်ဘစ်မက်ထရစ် (MT) NAD-Namibian ဒေါ်လာ (N $) NGN-နိုင်ဂျီးရီးယား naira (₦) NIO-နီကာရာဂွါကော်ဒို (C $) NOK- နော်ဝေခရို (kr) NPR- နီပေါရူပီး (₨) NZD- နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) OMR-Omani rial (ر.ع. ) PAB- ပနားမား balboa (ခ / ။ ) PEN-Sol (S /) PGK-Papua New Guinean kina (K) PHP-Filippo peso (₱) PKR- ပါကစ္စတန်ရူပီး (₨) PLN-Polish złoty (zł) PRB-Transnistrian ruble (р။ ) PYG-Paraguayan guaraní (₲) QAR-ကာတာ riyal (ر.ق) ရို - ရိုမေးနီးယားလူး (လိုင်) RSD-Serbian Dinar (ဘာသာ။ ) ရုရှားရုရှားရူဘယ် (ရုရှား) RWF-ရဝမ်ဒါဖရန့် (Fr) SAR-Saudi riyal (ر.س) SCR-Seychellois ရူပီး (₨) SDG - ဆူဒန်ပေါင် (س.س. ) SEK- ဆွီဒင်ခရိုနာ (kr) SGD - စင်ကာပူဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) SLL-Sierra Leonean Leone (လီ) SOS-Somali shilling (Sh) SRD- ဆူရာနမ်ဒေါ်လာ ($) SSP-South ဆူဒန်ပေါင် (£) SYP-Siria ပေါင် (ل.س) SZL-Swazi lilangeni (L) THB-Thai ဘတ် (฿) TJS- တာဂျစ်ကစ္စတန် Somoni (ЅМ) TMT-Turkmenistan манат (m) TND-Tunisian Dinar (د.ت) TRY-Turkish lira (l) TWD- ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာအသစ် (NT $) ယူကရိန်းယူကရိန်းဟဗားရီးယား (₴) အမေရိကန် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (အမေရိကန်) ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) ZAR - တောင်အာဖရိက Rand (R) VND- ဗီယက်နမ်đồng (₫) TTD-Trinidad နှင့် Tobago ဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) TOP-Tonga pa'anga (T $) TZS-Tanzanian ရှယ်လ် (Sh) UGX- ယူဂန်ဒါဒေနောရိ (UGX) UYU-Uruguayan peso ($) UZS -Uzbekistani som (UZS) VEF- ဗင်နီဇွဲလားbolívar (Bs F) XAF - ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် (CFA) XCD-East ကာရစ်ဘီယံဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) XOF - အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် (CFA) YER-ယီမင်ပြိုင်ပွဲ (﷼) ZMW-Zambian kwacha (ZK)
ပုဂ္ဂလိက beta ကို v.3.6.20
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)100.00
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)550.00 - AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)770.00
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)1,750.00 - AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)1,850.00
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)850.00 - AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)1,100.00
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)2,199.00 - AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)2,377.00
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)2,500.00 AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)2,000.00
AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)29,955.00 AED - ယူအေအီး Dirham (د.إ)1,222.00
Cygnus Marketplace အကြောင်း
Cygnus marketplace သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသောအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစျေးကွက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်စေ့စေ့ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Cygnus သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ တက်ကြွ။ လုံခြုံသည်။ သင်လိုအပ်သောအရာကိုအွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူပါ။ အွန်လိုင်းအရောင်းအစဉ်အမြဲလွယ်ကူ & ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်www.cygnusnetwork.org"။
အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသော၊ CYGNUS MARKETPLACE Interface ကိုအနည်းငယ်သာထိရောက်သောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်အသုံးပြုသူများအားအသုံးပြုသူများသည်ပလက်ဖောင်းအားအလိုအလျောက်နှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ခွင့်ပြုသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။
Cygnus ဒီဇိုင်းသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်၊ တက်ကြွစေရန်၊ အသုံးပြုသူများနှင့်ပြောဆိုရန်၊ ၎င်းသည်အသက်ရှင်နေကြောင်းနားလည်ရန်တည်ဆောက်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်၍ ထိတွေ့နိုင်သောကုန်ပစ္စည်းကဏ္sectionsများကိုလည်းဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်
စင်မြင့်တစ်ခု၊ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၊ Cygnus သည်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား ၁၀၀ ကျော်နှင့်ငွေကြေး ၁၄၀ ကျော်ဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များနှင့်တစ်အိမ်တည်းအောက်အတားအဆီးများမရှိဘဲဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Cygnus Deal By Zone သည်သင့်အားအချိန်တိုအတွင်းမည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုသင်ရရှိရန်နှစ်သိမ့်မှုပေးသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုသော့ခတ်နိုင်ပြီး Cygnus သက်တူရွယ်တူများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်မဆိုထိတွေ့နိုင်သောအလားအလာရှိသည်။
CYGNUS လိမ်လည်မှု၊ လုယက်မှုများနှင့်ဆိုးဝါးသောသို့မဟုတ်ဆိုးရွားသည့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုကာကွယ်ရန်အဆင့်မြင့်သောလုံခြုံရေးကိုပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ချေးငွေကတ်ကိုမဆိုသိုလှောင်ထားသည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်မည်သည့်ငွေကြေးမဆိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ CYGNUS TOKEN PAYMENTS သည် PLATFORM မှ ထွက်၍ မည်သည့်တတိယအပိုင်းစနစ်မှမဆိုငွေပေးချေမှုကိုပေးသည်။ DATA သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်၊ TRANSACTIONAL SECURITY အဆင့်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
CYGNUS သည်သုံးစွဲသူများအားတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းအားဖြင့် ၂၄ နာရီ / ၇ နာရီအားပံ့ပိုးပေးသည်။ အသုံးပြုသူများသည်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောမည်သည့်ကိစ္စရပ်မဆိုမည်သည့်ကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်မည်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးပြုသူများမှထောက်ခံချက်ရယူခြင်းမရှိပါ။
အနာဂတ်တွင် Cygnus တိုကင်ကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်အကန့်အသတ်မဲ့“ တနေ့”၊ “ တစ်နေ့”၊ “ ၂ ရက်” နှင့်“ ပုံမှန်” ပေးပို့ခြင်းနှင့်သန်းနှင့်ချီသောအခမဲ့ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာစုစုပေါင်းရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်မှ ၃ ရက်အထိကြာပြီးကြားခံမပါ ၀ င်သည်။ Cygnus တိုကင်သည် Cygnus တိုကင်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုခွင့်ပြုသည်၊ အသုံးပြုသူများသည်ဂေဟစနစ်အတွင်းမှရရှိသောစွမ်းအားအပေါ် အခြေခံ၍ တိုကင်ဖြင့်ဆုချလိမ့်မည်
Cygnus ဈေးကွက်တွင် Cygnus Bookings၊ Cygnus လမ်းညွှန်၊ Cygnus ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Cygnus B2B စျေးကွက်၊ CygnusTube ကဲ့သို့ဆော့ဝဲလ်တိုးချဲ့မှုများရှိသည်။
Cygnus ဂေဟစနစ်နောက်ကွယ်မှရူပါရုံမှာကော်ပိုရေးရှင်းများသို့မဟုတ်တတိယပါတီများအစားရပ်ရွာလူထုကိုဗဟို ဦး စီးသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစနစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် CYGNUS သည် CYGNUS ကို“ CYGNUS QUALITY” MECHANISM ကိုအသုံးပြုသည်။ CYGNUS ကိုအစဉ်အမြဲထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအမြင့်ဆုံးသောစံနှုန်းများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့်ညံ့ဖျင်းသောအရည်အသွေးစာရင်းများ၊ www.cygnusnetwork.org/
- တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ (အဆင့် ၁)
- CYGNUS TOKEN အသုံးပြုမှုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး
- သီးသန့် CYGNUS မာတိကာကိုရယူပါ
- CYGNUS ECOSYSTEM သို့အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိခြင်း
- CYGNUS TOKEN DISTRIBUTION အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ
VETERAN (Cygnus တိုကင်နှင့်ဆက်စပ်သောအင်္ဂါရပ်များခဏတဖြုတ်မရနိုင်ပါ)
- CYGNUS တိုကင်ဖြန့်ဝေမှုအတွက်ရရှိနိုင်သည်
“ ၁၀၀” ၀ န်ဆောင်မှုများ (ယာယီမရရှိနိုင်သော)
- လက်ငင်းထောက်ပံ့မှု (အဆင့် X)
- CYGNUS ECOSYSEMEM, A ROM မှ Z သို့လုံး ၀ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ PREMIUM FEATURES အားလုံးပါ ၀ င်သည်။
- စာရင်း ၀ င်ကြေးနှင့်ချက်ချင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်ကုန်များမရှိပါ
- ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရောင်းဝယ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း + € 1,49
- ပုံမှန်အထောက်အပံ့ (အဆင့် 0)
- CYGNUS LOGISTICS အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ
- တနေ့၊ နှစ်ရက်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်မထိုက်တန်ပါ
PROFESSIONAL (Cygnus တိုကင်နှင့်ဆက်စပ်သောအင်္ဂါရပ်များခဏတဖြုတ်မရနိုင်ပါ)
- ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရောင်းဝယ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း + € 0,99
- တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ (အဆင့် ၁-၂)
- CYGNUS LOGISTICS အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်
- တနေ့၊ နှစ်ရက်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ထိုက်တန်သည်
- ရောင်းချခြင်းအပေါ်တစ်လလျှင် + + ၀.၅၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းသည် CYGNUS TOKEN အသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်
ကုမ္ပဏီ ဥပဒေရေးရာမူဝါဒများ Affiliates ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကျွွောငာ Beta တုံ့ပြန်ချက်
ငါနှင့်အတူသဘောတူ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေန *
Cygnus ဈေး ထုတ်ပစ်